MM Daily Life - Page 253 of 264 - News and Media
သင့်အမေကို ချစ်ရင် ဒါမျိုးတွေကို မလုပ်မိပါစေနဲ့….
သင့်အမေကို ချစ်ရင် ဒါမျိုးတွေကို မလုပ်မိပါစေနဲ့…. အမေတွေဆိုတာ သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင် ကိုယ့်ထက် ပိုပြီး ဦးစားပေးကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က သားသမီးအတွက် အသက်ပေးဖို့တောင် ဝန်မလေးကြတာမို့ သင့်ဘက်ကလည်း ပြန်ကျေးဇူးသိတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင် အခုလို ကြီးပျင်းလာဖို့အတွက် အမေတွေက အချိန်ပေးပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ကြတာပါ။ သင့်မေမေကို သင် ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချက်တွေ မလုပ်မိဖို့ လိုပါတယ်နော်။ (၁) ငြိုငြင်တာ အမေတွေနဲ့ သားသမီးတွေက အသက်တွေ ကွာသလို ခေတ်တွေလည်း ကွာပါတယ်။ ဒီအတွက် အဆင်မပြေမှုတွေလည်း ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ခေတ်လူငယ် ဖြစ်လို့ ပိုပြီး နားလည်လွယ်ပေမယ့် အမေတွေကတော့ ခေတ်နဲ့ မလိုက်မီတာကြောင့် မသိတာမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို လာမေးတဲ့အခါမှာ စိတ်မရှည်တာမျိုး၊ ရှင်းပြနေတာတောင် … Read more
လူကြားထဲမှာ မဖွယ်မရာလာလုပ်တဲ့ နှာဗူးကောင်ကို သတ္တိရှိရှိဒူးထောက်တောင်းပန်ခိုင်းတဲ့ မိန်းခလေး(ရုပ်သံ)
လူကြားထဲမှာ မဖွယ်မရာလာလုပ်တဲ့ နှာဗူးကောင်ကို သတ္တိရှိရှိဒူးထောက်တောင်းပန်ခိုင်းတဲ့ မိန်းခလေး(ရုပ်သံ) လူကြားထဲမှာ မဖွယ်မရာလာလုပ်တဲ့ နှာဗူးကောင်ကို သတ္တိရှိရှိဒူးထောက်တောင်းပန်ခိုင်းတဲ့ မိန်းခလေး(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးကို မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်တဲ့ တနှာရူးကောင်ကို သတ္တိရှိရှိ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ညီမလေး ဂျေဂေါင် ရိချိန်ကျောက်ဝိုင်းမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးကို မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်တဲ့ တနှာရူးကောင်ကို သတ္တိရှိရှိ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရဲတဲ့ ညီမလေးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Shareပေးကြပါ … ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ်အများပြည်သူသုံးယာဉ်တွေစီးကြတဲ့အခါဘဲဖြစ်ဖြစ် လူအများကြားသွားလာလှုပ်ရှားကြတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် လူယုတ်မာတွေရဲ့ မဖွယ်မရာပြုလုပ်မှုကို ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရှက်ကြောက်ပီး ငြိမ်နေသူများတဲ့အခါ စားနေကြကြောင်ဖားများက ထပ်မံကျူးလွန်ဖို့ ဝန်မလေးတော့ပါဘူး … ။ အခုဗီဒီယိုပါအမျိုးသမီးကတော့ တနှာရူးကောင်ကို သတ္တိရှိရှိ တုန့်ပြန်ရဲပါတယ် … ။ … Read more
ဝါတွင်း (၃)လအတွက် ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်နည်း
စိတျဝငျစားသူမြားအတှကျသာပါ မကွာခငျမှာ ဝါဝငျတော့မှာဆိုတော့ ဝါတှငျး (၃)လ ရကျပေါငျး(၉၀)စိပျတဲ့ ကိုးနဝငျးပုတီးစိပျနညျးလေး စိပျရမဲ့ ရကျလေးတှေ သကျမှတျပွီးပါပွီ ဒုတိယဝါဆိုလပွညျ့နေ့(ဓမ်မစကွာနမှေ့ သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့)ထိဖွဈပါတယျ သကျသတျလှတျလညျး စားစရာမလိုပါဘူးအခြိနျလညျး တိတိကကြစြိပျစရာမလိုပါဘူး နတေို့ငျး မှနျမှနျစိပျဖို့ပဲလိုပါတယျ စိပျမဲ့ နရေ့ကျမြား ၉ပါးစလုံးကိုနတေို့ငျးတဈပတျစီ အရဟံ (၁)ပတျ သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓေါ (၁)ပတျ ဝိဇ်ဇာစရဏသမ်ပန်နော (၁)ပတျ သုဂတော (၁)ပတျ လောကဝိဒူ (၁)ပတျ အနုတ်တရောပုရိသဒမ်မသာရထိ (၁)ပတျ သတ်ထာဒဝေမနုဿာနံ (၁)ပတျ ဗုဒ်ဓေါ (၁)ပတျ ဘဂဝါ (၁)ပတျ 3.. 8 . 2020. မှ 11. 8 . 2020 အထိ အရဟံ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ 12.8 .2020 . မှ … Read more
မြေပြိုမှုမှာ အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ ညီငယ်လေးများ… မြေပြိုမှုမှာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ ညီငယ်လေးတွေပါ …။ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် ရတက်မအေး ကိုဗစ်ဘေးလဲ မကြောက်နိုင်ရ ငါတို့ ဘဝ …။ မုန်းတိုင်းကလာ မိုးကရွာ စားဝတ်နေရေး မပြေလည် သေးတော့ လောကဓံကိုအန်တု ရာသီးဒဏ်ကို ယှဉ်ပြိုင်မနိုင် တို့ဘဝတွေ သေကြေရပြီ …။ သားနဲ့မယား ရှိနေသော်လည်း ငွေကြေးဥစ္စာ မရှိရှာတော့ …၊ ပျော်စရာနတ္ထိ အသီးတစ်ရား ကုဋေကုဋာ နေရက်များစွာ ဝှေခါမှာကျာက်တွေရှာခဲ့ နေမပျော်လည်း မှော်ထဲနေခဲ့ တစ်နေ့နေ့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကိုရင်မှာပိုက်၍ ပေါက်တူးကိုထမ်း…ပေါက်ချွန်ကိုဆွဲ လောပန်းဖြစ်ရန် စိတ်ရှည်သည်ခံ နေစဉ်ရက်စက် ကျောက်တူးထွက်ခဲ့ …။ အိပ်ရေးပျက် အခါခါ ကြိုးစားရှာလည်း ကံကြမ္မာရယ်အခြေမပေး အနေဝေးလေတော့ …။ သေဘေးနဲ့ ကြုံရပြန်ပြီ … Read more
နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်သွားတဲ့အဖေကို တစ်ကြိမ်လောက် တွေ့ချင်သေးပါတယ်ဆိုတဲ့ သမီးလေး…
နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်သွားတဲ့အဖေကို တစ်ကြိမ်လောက် တွေ့ချင်သေးပါတယ်ဆိုတဲ့ သမီးလေး… မိသားစုအတွက် သားသမီးတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးနဲ့ ထားချင်လို့ဆိုပြီး အဖေ ကျောက်သွားတူးတယ် . . .။ ခုတော့ အဖေ သမီးတို့အဝေးကို အပြီးထွက်သွားပြီလား . . . ? အဖေ အလုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်ဆို ဖုန်းလေးခေါ်ပြီး သမီးတို့ရေ နေကောင်းလား . . .? ဖေဖေ ပြန်လာတော့မှာနော် . . .။ ဖေဖေ သမီးတို့အတွက် သမီးတို့လိုချင်တဲ့အိမ်လေး ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံစုနေတာ ပြည့်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့ဖေဖေ. . .။ ခုတော့ အဝေးဆုံးကို ထွက်သွားပြီလား ဖေဖေ . . . သူများတွေ အလုပ်တွေနားလို့ မိသားစုတွေဆီပြန်ကြရင်တောင် . . … Read more
ကျွန်တော့ညီလေး အလောင်းကို ခုထိမတွေ့သေးဘူးဗျာ…
ကျွန်တော့ညီလေး အလောင်းကို ခုထိမတွေ့သေးဘူးဗျာ… ဝှေခါမြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်တွင် ယူကြုံးမရဖြစ်နေသူ အကိုတစ်ဦး ညီဖြစ်သူ အလောင်း တွေ့ခွင့်ရဖို့မျှော်နေပါတယ် …။😭 ကျွန်တော့ ညီလေးအလောင်းကို ခုထိ မတွေ့သေးဘူးဗျာ …။ ကျွန်တော့်ညီလေးကို အခုထက်ထိ မတွေ့ကြသေးဘူးလားဗျာ …။ သူပြန်လာမယ်ပြောသွားတာ ။ ဒီနေ့နဲ့ဆို ၃ ရက်ရှိနြေပြီ …။ အကို့မှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ညီလေးရဲ့ ရုပ်အလောင်းလေးတွေ့ချင်လို့ ခဏခဏလာရှာနေရတာ …။ ကယ်ဆယ်ရေးတို့ရယ် ညီလေးအလောင်းတွေ့ရင် ကျွန်တော့်ပြောပါဦး ‘’ဝှေခါမြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်တွင် ယူကြုံးမရဖြစ်နေသူ အကိုတစ်ဦး မိသားစုဝင် ညီဖြစ်သူ အလောင်း တွေ့ခွင့်ရဖို့ မျှော်နေ ..၊ ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သူ့မှာ ရင်ထဲက သောကဟာ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်လဲမသိ မဖြေနိုင် စကားမပြောနိုင်နဲ့ ငိုပဲငိုနေရှာပါတယ် …။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြား တပ်သားတွေဘေး အပေါတက်လိုက် … Read more
ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်(၇)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း…
ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်(၇)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း… ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ တစ်လတာအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းကြာသပတေးသားသမီးများ ဒီလအတွင်းမှာ သင့်အတွက် ကံဇာတာကတော့ မိသားစု အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးတွေ ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်လာပါမယ် …။ အိုးအိမ်ကိစ္စ ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ တွေမှာလည်း ထူးထူးခြားခြား တိုးတက် အောင်မြင်ခြင်း မိသားစု ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝ အောင်မြင်မှု့ရရှိပါလိမ့်မယ် …..။ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပါတ်သက်၍ မြောက်အရပ် ၊ အရှေ့မြောက်အရပ်တွေမှာ အခွင့်အရေး အခွင့်အလန်းများ ရှာဖွေသင့်ပါတယ် …။ ထိုအရပ်ဒေသများတွင် အောင်မြင်မှု့ ရရှိနိုင်သည်။ မိမိနေအိမ်သို့ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သော ရဟန်း သံဃာတော် တစ်ပါး ထူးထူးခြားခြား ကြွရောက်လာပါလိမ့်မယ် …။ အလွန်ကောင်းသော … Read more
← Previous Page1 … Page252 Page253 Page254 … Page264 Next →